बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा सेनाका बहालवाला सहायक रथी डा. रमेश पनि मुछिए - samayapost.com
बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा सेनाका बहालवाला सहायक रथी डा. रमेश पनि मुछिए
समयपोष्ट २०७४ पुष ४ गते १:३१
कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा नेपाली सेनाका बहालवाला सहायक रथी डा. रमेश विष्ट पनि मुछिएका छन् ।
बैंकको न्युरोड शाखाबाट हिनामिना गरिएको करिब पाँच करोडमध्ये ३३ लाख सहायक रथी विष्टको बैंक खातामा पाइएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
पुष्टि भए कारबाही
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहालले भने, ‘बैंकको रकम हिनामिना सम्बन्धमा सेनाका जिम्मेवार अधिकारी मुछिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ । घटनाबारे जाँचबुझ हुँदै छ । पुष्टि भए कारबाही अघि बढाइनेछ ।’